"Allah Ayaan Ku Dhaartaye Diyaar Baan U Ahay" - Xiddig Ka Tirsan Real Madrid Oo Ku Dhaartay Inuu Feedhyahan Noqonayo - Gool24.Net
“Allah Ayaan Ku Dhaartaye Diyaar Baan U Ahay” – Xiddig Ka Tirsan Real Madrid Oo Ku Dhaartay Inuu Feedhyahan Noqonayo
Dareenka ciyaartoyda, tababareyaasha iyo taageereyaashuba waxa uu ku jeedaa garoonka Etihad Stadium oo ay Jimcaha ku wada ciyaari doonaan Real Madrid iyo Manchester City, iyagoo lugtii hore ee garoonka Santiago Bernabeu kusoo dhamaystay 2-1 ay City kusoo badisay.
Real Madrid oo horyaalka LaLiga kusoo guuleysatay iyo Manchester City oo ka qadday horyaalka Premier League iyo FA Cup, waxa uu kulankoodu noqonayaa mid si weyn dunida oo dhan isha ugu hayso, waxaana Zidane uu u baahan yahay in kooxdiisu dhaliso ugu yaraan laba gool, shabaqoodana ilaashadaan si ay wareegga xiga ugu gudbi karaan, laakiin Pep Guardiola ayay laacibiintiisu kaliya u baahan yihiin inay shabaqooda ilaashadaan, ama laga dhaliyo hal gool oo kaliya amaba ay barbarro galaan.
Karim Benzema ayaa ahaa ciyaartoyga Real Madrid guusha horyaalka u horseeday, waxaanu ku naalooday qaab ciyaareed wanaagsan oo dhaawac la’aan ah, isaga oo 47 kulan oo uu ciyaaray dhamaan kulamadii xili ciyaareedkan shabaqa taabsiiyey 26 gool, isla markaana ku daray 11 caawimood.
32 jirkan oo ay diiraddu si gaar ah u haysan doonto, ayaa waxa uu ciyaarta ka hor isku soo jeediyey adduunyada, isaga oo sheegay inuu doonayo inuu noqdo feedhyahan marka uu ciyaaraha kubadda cagta ka fadhiisto.
Waxa uu Karim Benzema caddeeyey in aanay wax baqasho ahi ka haynin inuu ku wanaagsanaan doono ciyaaraha feedhka, waxaanu hoosta ka xariiqay feedhyahanka Muslimka ah ee Mike Tyson oo uu taageero u yahay.
“Marka uu waayahayga kubaddu cagtu dhamaado, maxaa diidaya inaan muddo lix bilood ah kula tababarto?” Ayuu yidhi Benzema oo la hadlayay Fouad Ezbiri oo ciyaara feedhka iyo laagga isku jira.
“Haddii aad markaas kaddib u malaysaan inaan diyaar u ahay inaan dagaallamo, wax dhibaato ahi ma jirayaan. Ilaahay ayaan ku dhaartaye, diyaar ayaan u ahay.”
Karim Benzema ayaa xagaagii hore xilligii uu fasaxa ku jiray waxa la arkay isaga oo tababar dhinaca feedhka ah samaynaya, sidoo kalena toogashada qoriga ku baranaya waddanka Maraykanka.
man city FA cup iyo prmeir leage xagay ku qaday fadlan iska hubiya waxad gudbinaysaan
Abdiwahab Ahmed Abeeye says:
Saaxiib, way qaadday lama odhanin e, way ka qadday (may calfanin) ayaa qoran
adiga dib ugu laabo qoraalka inta aadan waxba sheegin
Soomali wax hubsiimo la.aanladho baalaguibtileeyay😂😂😂😂🤣